Shina mba hampandrosoana ny fialam-boly mendrika & orinasa - Sina Tianjin Shengxin Sports Goods
Shina mba hampandrosoana ny fialam-boly mendrika & orinasa
Ny Filankevi-panjakana dia namoaka drafitra mba hampitombo ny indostrian'ny fialam-boly mendrika sy, fametrahana tanjona mba hampitombo ny Output ny sehatra ho mihoatra ny 3 tapitrisa tapitrisa yuan ($ 442.5 lavitrisa) tamin'ny 2025.
By Avy eo, ny tontolo iainana salama ho noforonina, miaraka amin'ny rafitra ara-dalàna ny orinasa, manankarena famatsiana ny vokatra sy ny fotodrafitrasa mendrika, ambony tinady ny fanjifana sy ny asa fanompoana mahay kokoa, araka ny tahirin-kevitra ofisialy nivoaka tamin'ny Oct 28.
Ary niantso ny hanatsarana ny asa fanompoana mendrika SY FIALAM-BOLY rafitra ao amin'ny firenena amin'ny alalan'ny asa fampandrosoana bodybuilding isan'andro, ivelan'ny trano fanatanjahan-tena, ary ny fanatanjahan-tena miaraka amin'ny toetra ara-kolontsaina, fanatanjahan-tena mampirisika ny fizahan-tany, ary ny fampidirana Internet ny orinasa Plus ny fampandrosoana.
Daily mendrika fanatanjahan-tena, toy ny baolina kitra, basket, volley, Ping-pong, tenisy sy mihazakazaka, tokony ho nampirisika bebe kokoa sy besinimaro, hoy ny antontan-taratasy. Hafa ivelan'ny trano sy ny lamaody ihany koa ny fanatanjahan-tena fampandrosoana dia tokony ho speeded izy, anisan'izany ny ririnina, Mountaineering, rano fanatanjahan-tena, maotera fanatanjahan-tena, equestrian sy Golf. Ny fanatanjahan-tena miaraka amin'ny toetra ara-kolontsaina, toy ny kung-fu, sambo dragona sy ny liona nandihy ihany koa tafiditra ao amin'ny drafitra.
Nampirisika ny drafitra ihany koa ny fanatanjahan-tena hanana ny fizahan-tany sy hanohana ny orinasa miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia, toy ny aterineto, Big Data sy ny rahona computing.
Raha ny fambolena tsena mpilalao ao amin'ny orinasa dia momba, ny drafitra nilaza Fitness SY FIALAM-BOLY orinasa sy ny ara-tsosialy fikambanana dia tokony ho ampirisihina hanitatra raharaham-barotra, ary ny sasany toetra Shinoa marika dia entanina mba hitady fanohanana bebe kokoa avy amin'ny Renivohitra tsena - toy ny manao IPO sy famoahana famatorana - mba hanatsarana ny fifaninanana iraisam-pirenena sy izao tontolo izao-kilasy ho lasa orinasa.
Ny manam-pahefana eo an-toerana miantso mba hanorina incubator sehatra ho fanohanana startups nifantoka tamin'ny mendrika SY FIALAM-BOLY, indrindra fa ireo efa misotro ronono natomboky ny atleta. Ankoatra izany, dia nongovernment fanatanjahan-tena ihany koa ny fikambanana ampirisihina mba hanitarana ny asa sy hisolo, amin'ny lafiny sasany, ny fanatanjahan-tena-bahoaka tolotra omen'ny governemanta.
Ankoatra ny fanohanana mpitovo fanatanjahan-tena sy ny orinasa, ny tahirin-kevitra ihany koa ny miantso ho optimisé rafitra orinasa. Ohatry ny fanompoana sehatra ao amin'ny orinasa dia nampirisika mba hatsangana. Nitarika mendrika langilangy, asa, orinasa faladiany sy ny tetikasa tokony hihaviana hanaovana ny hametraka ohatra ho an'ny fampandrosoana ny orinasa.
Regions amin'ny harena voajanahary tsy manam-paharoa, anisan'izany ny ala, rano, faritra mando, ny tendrombohitra sy ny an-efitra, dia entanina mba hanana fanatanjahan-tena manokana izay mifanaraka amin'ny toe-javatra eo an-toerana, mba hamorona ny marika.
Ny tahirin-kevitra antsoina hoe noho ny fananganana fotodrafitrasa mendrika SY FIALAM-BOLY amin'ny alalan'ny mampiasa tanàn-dehibe ao anatin'izany ny parklands, toerana banga, trano tafontrano sy lakaly - famoronana Fitness sehatra ao anatin'ny 15 minitra 'lavitra.
Ankoatra izany, dia nampirisika kianja efa misy mampiasa loharanon-karena, haingana orinasa sy ny andrim-panjakana mba hanokatra ny fanatanjahan-tena toerana ho an'ny besinimaro, ary mampahery sekoly 'toerana hijanona hisokatra rehefa fotoam-pianarana sy amin'ny fety.
Maro ny fialam-boly manokana Fitness sy foto-drafitrasa toy ny tendrombohitra sy ny ivelan'ny trano toby, fialam-boly toby fiara, sy ny tongotra lavitra sy ny mitaingina TOBIN-DASANTSY dia tokony ho vita ihany koa, hoy ny antontan-taratasy.
Mba hanatsarana ny fikarohana, ny fampandrosoana sy ny orinasa mpamokatra entana fahaiza ho mendrika sy ny fialam fitaovana, ny governemanta nampirisika orinasa, fikarohana siantifika andrim-panjakana, ary ny ara-tsosialy ny fikambanana mba hanangana hazo fijaliana-indostria fifanekena, sy ny fanohanana Fitness fitaovana orinasa mpamokatra entana orinasa mba hanitatra ny raharaham-barotra ny fanompoana ny sehatra, fitondran-tena ampitan-dranomasina fampitambarana orinasa na novidiny, mpiray Ventures, ary ny mpiray fampandrosoana.
Ny antontan-taratasy nikasa ny hanohana orinasa eo amin'ny fampivelarana mifanaraka fitaovana ho an'ny samihafa ilain'ny taona samihafa, ary koa ny fitaovana fikarohana amin'ny sisin-teknolojia toy ny fanatanjahan-tena wearable fitaovana sy ny fanatanjahan-tena fitaovana virtoaly ny zava-misy.
Mandritra izany fotoana izany, mifandray amin'ny politika dia tokony ho kokoa ny manome bebe kokoa tsy hanahirana sy ny fiarovana hafa Fitness vondrona, popularize siansa fahalalana ny Fitness, hisarika ara-tsosialy vola ny vola ao amin'ny fanatanjahan-tena orinasa, hanamafy orina Fitness fitantanana talenta, ary koa ny hametraka fanompoana fepetra sy ny kalitao faneva eny amin'ny Fitness sy ny fialam-boly eo amin'ny sehatry ny fanompoana, fahaiza-manao fiofanana, ny asa fitantanana, fanorenana fotodrafitrasa, orinasa mpamokatra entana, sy ny fitaovana.